Sleeping Habits – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အဖြစ်များတဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာ . . .
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင့်လာတဲ့အခါ အိပ်မပျော်တာက ပိုဆိုးလာပါတယ်၊ အဲဒါကကော ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေ လိုက်နာလို့ ရပါသလဲဆရာ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ လရင့်လာရင် အိပ်မပျော်ဘူးဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို...
လှပစွာနိုးထနိုင်မည့် အိပ်စက်အနားယူမှု အနေအထား
ပက်လက်လှန် အိပ်စက်ခြင်း အိပ်ရာနိုးလာချိန်မှာ မျက်နှာကို ပွတ်တိုက်မှုနဲ့ ဖိအားဖြစ်တာကြောင့်ပေါ်တတ်တဲ့ အရေးကြောင်းတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ မျက်စိအောက် အရည်စုပုံမှုမဖြစ်အောင် ခေါင်းအုံးကို နည်းနည်းလေး မြှင့်ထားပေးပါ။ ဘေးတစောင်း အိပ်စက်ခြင်း ဘေးတစောင်းအနေအထားနဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက် စောင်းအိပ်ပေးတာက မျက်နှာမှာ အရေးကြောင်းပေါ်တာကို လျော့ကျစေပါတယ်။ နှာပိတ်တာ၊...
အိပ်မပျော်တတ်သူများကို ချက်ချင်းအိပ်မောကျသွားစေမည့် ကိုယ်ဟန်အနေအထား ၆ မျိုး
———၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူအနည်းငယ်ကသာ အိပ်ရာထဲလှဲလိုက်တာနဲ့ အိပ်မောကျသွားတတ်တာပါ။ တချို့လူတွေကျတော့ အိပ်ရာဝင်ပြီး လူးလိမ့်ရင်း တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင် ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းတာက အာရုံကြောစနစ်ကို ငြိမ်သက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြေလျော့စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအနေအထားတွေ ရှိနေတာပါပဲ။ အောက်ပါရိုးစင်းတဲ့...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေ ဂျွန်ရဲ့ဇနီးမေရီက စကားစပ်မိလို့ မေးမြန်းတယ်။ “ ဂျွန်က အိပ်ပျော်နေရင်း စကားပြောတဲ့အကျင့် ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အိပ်ရေးပျက်ရတဲ့ ညတွေက မနည်းတော့ပါဘူး။ အဲဒါ စိတ်ရောဂါလား” “ အိပ်ပျော်နေရင်း...